China GT usoro drum ihuenyo rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
GT - usoro drum ihuenyo bụ a pụrụ iche echetakwa akụrụngwa mepụtara anyị factory maka nkà mmụta banyere ígwè, chemical ụlọ ọrụ, ụlọ ihe, Ngwuputa na ndị ọzọ ọrụ. Ọ na - emeri nsogbu nke mkpọchi ihuenyo mgbe ị na - enyocha ihe mgbochi mmiri site na ntanetị na ntanetị na ntanetị, na - eme ka mmepụta na ntụkwasị obi nke sistemụ nyocha dị mma, ma bụrụ ndị ọtụtụ ndị ọrụ toro.
The moto jikọọ na drum ngwaọrụ site na reducer site njikọ, na-akwọ ụgbọala drum agba gburugburu ya axis. Mgbe ihe ndị ahụ na-abanye na ngwa igwe ahụ, n'ihi ntụgharị nke drum (nke nwere ike ịgbanye), a na-atụgharị ihe ndị dị na ihuenyo ahụ ma gbanwee ya, nke mere na a na-ahapụ ihe ndị ruru eru site na ntaneti na ala nke njedebe azụ. nke drum ahụ, a na-ahapụkwa ihe ndị a na-erughị eru site n'ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ nke ịgbà ahụ. N'ihi nkwanye na ịtụghari ihe dị n'ime drọm ahụ, enwere ike ịpụpụ ihe ahụ n'ime oghere ihuenyo iji gbochie oghere ihuenyo ahụ igbochi.
Site na mkpanaka ekwentị, ọ na-enwe mmetụta dị nro na-adaba adaba karịa ịkwaga buru ibu. Esịtidem akụrụngwa zuru ezu, drum ihuenyo bụ tumadi ekewet nke moto, reducer, drum echichi, etiti, akara cover, ibubata na mbupụ. The ịba uru nlereanya na-mere ndokwa na etiti ọnụ na a drum n'usoro ngwaọrụ, nke na-mere ndokwa na ala aro na ejikọrọ na ala aro.
Full ọrụ drum ihuenyo ala aja ihuenyo mgbe ihe n'ime drum echichi, n'ihi na tilt na adiana nke drum echichi, ihe na ihuenyo elu na-na-agbanwe na akpọrepu, nke mere na ihe ndị na-ezute nkọwa na-atara site tinyekwa na ala nke ngwụcha azụ nke ịgba ahụ, a na-ahapụkwa ihe ndị a na-erughị eru site n'ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ọdụ nke ụda ahụ. N'ihi na ndaghari na ịtụghari ihe na drọm ahụ, enwere ike ịpụpụ ihe ahụ n'ime oghere ihuenyo.
.Dị Ike ọgwụgwọ m³/ h Ike ike kw
Nke gara aga: GPS usoro elu ugboro vibration dewatering ihuenyo
Osote: GZS ala ihuenyo
Drum Screen Sand Machine
Ihuenyo Drum Screen na-enyo enyo
Drum Screening Machine Grading ihuenyo
Gts Drum ihuenyo
N'usoro Drum ihuenyo
Omume ihuenyo Drum Screen
Vibrating Screen Grading Drum ihuenyo
SCG ejiji ebufe
GZS ala ihuenyo